कमलाखोँज वासिले अब छिटैनै निकासको वाटो पाउने भएका छन् । कमला नदिका कारण वर्षा याम सगैँ हिउँद याममा धेरै दुःख झेलिरहेका कमलाखोँज वासिले दुधौली नगरपालिका वडा नं. ४ खनिया र वडा नं. ६ जगाडी को बिचमा रहेको कमला नदिमा पक्कि पुल निमार्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे सगैँ कमलाखोँज वासिले निकासको बाटो पाउने पक्का भएको हो । कमला खोँज वासिको निकासका लागि नेपाल सरकार बाट पक्कि पुलको बजेट परेको थियो ।
६० करोड लागतमा रसुवा कन्सट्रक्सन कम्पनीले दुई वर्ष सम्ममा पुलको काम सक्ने गरी वोलपत्र मार्फत सम्झौता भएको थियो । २०७३ साल जेठमा पुलको कामका लागी सम्झौता भएको रसुवा कन्सट्रक्सनले बताएको छ । कन्सट्रक्सनका अनुसार पुलको अन्तम चरण काम अहिले भईरहेको छ , पुलको काम २०७५ साल जेठ अन्तिम सम्ममा सक्ने र असार देखि पुल प्रयोगमा ल्याउने बताएको छ ।
७५ प्रतिशत पुलको काम सकिएको रसुवा कन्सट्रक्सनले दाबि गरेको छ । पुलको कार्य सम्पन्न भए सगैँ कमलाखोँज वासिमा धेरै राहात हुने स्थानिय हेम बहादुर लामाले बताउनु भयो । पुर्वमा तावा खोला, पश्चिम र दक्षिणमा कमला नदि यस्तै उत्तरमा जंगल भएको दुधौली नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरु वर्षाको समयमा बिरामी भएपनि कानमा तेल हालेर बस्नु पर्ने वाध्यता थियो । अझ भन्ने हो भने समयमा उपचार गराउन लौजान नसक्दा वर्षा याममा सर्पको टोकाई बाट अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्येता थियो ।
कमला नदिको विभिन्न स्थानमा पक्कि पुल बन्दै
कमला नदिमा अझै पुलहरुको निमार्ण कार्य थालनि गर्ने समेत रसुवा कन्सट्रक्सनले बताएको छ । कमला नदिकै छुट्टाछुटै ३ स्थानमा पक्कि पुलका लागी कन्सट्रक्सनलाई वोलपत्र परेको कारण अन्य स्थानमा पनि पक्कि पुल निर्माण गरीने कन्सट्रक्सनले बताएको छ । दुधौली नगरपालिका वडा नं. ११ टाडिँ देखि यता वडा नं. ९ खिरियनीमा लगभग ७५ करोडको लागतमा पुलको निमार्ण हुन लागेको छ । दुधौली नगरकै वडा नं. ३ डकाहा र वडा नं. ४ कालापानिको बिच कमला नदिमा पनि पक्कि पुलको लागि बजेट परेको छ, त्यसको जिम्मा पनि रसुवा कन्सट्रक्सनले नै लिएको छ । यस्तै झुगा र धनसरीको बिच कमला नदिमा पनि पक्कि पुल बन्नका लागि बजेट परेको बताईएको छ ।